Iinqanawa ezibalaseleyo I. "Ndibize u-Ismael" | Uncwadi lwangoku
Umfuziselo we encinci. Ukusuka kuthotho lweTV yaseJamani Moby Dick (2006)
NgoSeptemba 28 odlulileyo yayinguye Isikhumbuzo seminyaka eyi-125 sokubhubha kombhali waseMelika uHerman Melville. Isidalwa sayo esaziwayo, iMoby Dick, yeyona whale idumileyo kuncwadi lwehlabathi kwaye iyafana neyona ndawo iyingozi kwaye inika umdla elwandle. Kwaye mna, mhlawumbi kuba ndivela kwilizwe elomileyo, Ndinegazi elivela kumatiloshe uIshmayeli, umpirati uJohn Silver ixesha elide kunye noCaptain Jack Aubrey.
Ndikunye nabo ndahamba iilwandle kunye neelwandle ndileqa iminenga, izilo kunye neentshaba ezahlukeneyo. Ndinqumle ii-gales eCape Horn, ndachukumisa ikhulu lamazibuko eMauritius okanye uFudo ndaza ndafumana ubuncwane obungenakulinganiswa. Kuba intelekelelo, intelekelelo, uvakalelo lomngcipheko, uloyiso kunye noloyiso, lendiza okanye ubushushu bamadabi zixabiso. Kodwa ngekhe ndiphile ixesha elide ukuba bendingathumanga kwiinqanawa zabo njengeentsomi njengabo. Akunakwenzeka ukuba udwelise wonke umntu endimkhonzileyo ngenxa yoko ndibambelela kwaba bathathu. Ukuba ufuna ukuhamba nam, Masingene ebhodini eyokuqala: the encinci.
2 Kwimiboniso bhanyabhanya
3 Kutheni ukhwele iPequod
Intsomi encinci, i-brig ene-davits ezenziwe ngethambo lomnenga, yayisekwe kumnenga Essex, owathi ngo-1820 wahlaselwa ngumnenga. Abasindileyo abambalwa bachitha iintsuku ezingama-95 elwandle emva kokutshona kwenqanawa kwaye kwafuneka babhenele ekutyeni abantu. UMelville, owayekwangumnenga, wafunda ngamabali abo bantu banelishwa. Ubunzima bakhe buphela bukhuthaza enye yeenoveli ezinkulu ze-adventure ezakha zabhalwa.
Ebuntwaneni bam ndibone ezona bhanyabhanya zakudala ze Moby Dick y Isiqithi sobuncwane ngaphambi kokufunda iinoveli. Kwaye ngaphezulu kwengxoxo, eyona nto yandichukumisa kakhulu yayingamanani, iiprofayili kunye noyilo lweenqanawa zokuhamba. Olo kunye nolwimi lwasolwandle. Emva koko kwavela ukuba ibali lalinomdla njengabo. A Moby Dick Kuya kufuneka ungeze uloyiko olongezelelekileyo lomnenga omkhulu omhlopheUmzekeliso wobubi nazo zonke izilo ezitshutshisa umntu.
Kodwa mhlawumbi uKaputeni uAhabhi wabangela uloyiko ngakumbi., uphawu olukhulu nangakumbi lokuba obo bubi kunye nezo monsters zinokuba zezethu. Kumaxesha ambalwa imeko yemeko yomntu ichazwe ngcono xa inzondo, ingqumbo kunye nomnqweno wokwenza impindezelo uzibamba ngandlela zonke.
Kwaye ukuba into inokuhamba nengcinga, kukuzonwabisa kwayo nge-cinema. Kunye adventures ukuba kube lula. Uhlengahlengiso lwe Moby Dick kwiscreen esikhulu akunakubalwa, kodwa ndicinga ukuba inkumbulo edityanisiweyo isala nayo leyo yenziwa nguJohn Huston ngo-1956. Umlawuli webali, ubudala begolide yaseHollywood, umlingisi omangalisayo….
Okokugqibela, Embindini wolwandle (URon Howard, 2015), othembekileyo kwimbali yokwenyani ye Essex kwaye izele ziziphumo ezizodwa, ewe, inomdla kakhulu, kodwa hayi, ayisiyo kaHuston. Ngokuqinisekileyo ayingobalaseleyo uGregory Peck njengo-Captain Ahabi. Hayi i-Orson Welles okanye i-Leo Genn njengo Mnumzana Starbuck okanye uJames Robertson Justice. Akunakwenzeka ukuba ube yiklasi.
Njengomdla, kwinguqulelo kaHuston, i encinci Kwakuyi-schooner ukusuka ngo-1870. Inxalenye yokufota yayiseGran Canaria, eLas Palmas kunye naseLas Canteras elunxwemeni, ngo-1954. Y UGregory Peck kunqabile ukuba ngcono kwiimovie kunokuba udlale umdlalo, uphazamisekile kwaye unobundlobongela uKaputeni uAhabhi.
Kutheni ukhwela ibhodi encinci
Kuba Uyaqinisekiswa lolona hambo luphazamisayo noloyikisayo. Kuba uyakucela inceba phantsi kwezaqhwithi kwaye awuzukukwazi ukudinwa kukuphakama kolwandle, yonke into engaziwayo emele kunye namandla ezilwanyana. Kodwa ikakhulu ngoba Uya kothuka xa ufumanisa ukuba eyona nto yoyikisayo, eyingozi neyoyikekayo nguwe. Ukuba uyakwazi ukuyamkela kwaye unethamsanqa, uya kuphila, uza kubuya kwaye uza kuba nakho ukubalisa ngayo. NjengoIsmael.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Iinqanawa ezibalaseleyo I. "Ndibize u-Ismael"